Ukumakwa okungaphezulu kwe-DTG kusuka engxenyeni eyodwa - I-P & M COMBUTER EMBROIDERY → izingubo zokuphromotha • Izingubo zokusebenza
Ukuphrinta kwe-DTG - kungenzeka ukuphrinta kusuka kucezu olulodwa
Ukuphrinta kwe-DTG kungenye yezindlela ezintsha zokumaka izingubo nezinye izinsimbi. Inqubo ye-DTG ikuvumela ukuthi usebenzise noma imiphi imidwebo kwindwangu kakotini noma kukotini ngokuhlanganiswa kwe-elastane / viscose. Izithombe zenziwa kusetshenziswa iphrinta ekhethekile. Imishini esinayo epaki yethu yomshini iyimodeli yakamuva yephrinta Mfowethu GTXpro Bulkokuthi, ngenxa yamakhanda ezimboni, isheshe inyathele ngqo kokuqukethwe. Ukuphrinta kwe-DTG kunika amandla ukukhiqizwa kabusha kombala okuphelele ngokushintshwa kombala. Ukuphrinta kungenzeka ngaphandle kwesidingo sokulungiselela iphrojekthi kusuka esiqeshini esisodwa.
Amaski okotini ahlanganisiwe, osayizi besifazane nabesilisa, lapho kungenzeka kube khona noma ilogo yenkampani yokuphrinta
Ukuphrinta kumamaski nakwizesekeli usebenzisa indlela ye-DTG nganoma iyiphi ilogo yabasebenzi
Ukuphrinta kwe-DTG kuhle kokumakwa kwesikali kanye nama-edishini akhawulelwe
Ukuphrinta kuma-T-shirts usebenzisa indlela ye-DTG kuyatholakala kusuka kocezu olulodwa
Ukulandela izincomo zomkhiqizi kuzosivumela ukuthi sijabulele umphumela wephrojekthi yethu isikhathi eside.
Ukotini ofakwe kumaskki nge-DTG logo ukuphrinta
Ukuphrinta kwe-DTGukuphrinta kuzikibhaukuphrinta ezingutsheni zeMasovianUkuphrinta kweRawa Mazowieckakuphrinta okokugqoka okunophawu lwe-DTGkuprintwa ibhulukweI-DTG Polandizipho ngazinyeIsikibha sesiphoIzikibha ezinophawu lweMszczonówizikibha ezinombhaloizikibha ezinesithombengesiphoUkudlula ngokweqile kwe-DTGokweqile kwe-DTG Mazowieckiephrinta uLodzRawa logo ukuphrintalogo phrinta ngegama elithi Lodzuphawu kuzesekeliphrinta kuma-sweatshirtsphrinta kuma-capsukuphrinta ezingutsheni zabasebenziukuphrinta kusuka kucezu olulodwaImprint Warsawumbhalo weWroclawkuphrinta izikibha zaseKatowiceimiklomelo enamalogo emincintiswanonaruk emasakeniizingubo zabasebenzi baseStrykówizingubo ezinokuphrinta kwe-Niepołomiceizingubo ezimakwe nge-DTG StrykówIzimpahla ezimakwe nguNiepołomiceumqondoisipho sabasebenziisipho esenziwe ngezifisoizipho ezinelogoizipho ezinesithombeizingubo zabasebenziizingubo zasendlini ephrintiweUkumaka i-DTGukumakwa kwezembatho e-Łódź